ယူနီကုတ် | ဟန်ဆန်း
ဘာကြောင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြသလဲ။ ဘာကြောင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်သလဲ။
စံမီတဲ့ ယူနီကုတ်ကို ဘာ‌ကြောင့် ‌ပြောင်းလဲသုံးလာကြသလဲ၊ ဘာ‌ကြောင့် ‌ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်သလဲဆိုတဲ့ ‌ဆွေး‌နွေးချက်‌တွေကို ‌ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
January 15, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
စံသတ်မှတ်ချက်ကို အတိအကျမလိုက်နာထားတဲ့ ဖောင့်တစ်ခုက မြန်မာ့အိုင်တီလောကကို အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာကို ရေးလို့မရတဲ့ အချိန်မှာ နည်းနည်းတော့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တယ်။
January 14, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
ယူနီကုတ် ၁ဝ၁ နှင့် ဘာသာစကား၊ ဘာသာဗေဒအရင်းအမြစ်ကိစ္စ
ယူနီကုဒ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ISO ရဲ့ 10646 ကို လိုက်နာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ISO လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ISO မှာရှိတဲ့ တစ်ခြား စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာလည်း ချိန်ညှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ Platform တစ်ခုပါ။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘယ် Platform မှာပဲ ရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
January 13, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
စံ(Standard)တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီစံအတိုင်းကို လိုက်ရပါတယ်။ စံကို မလိုက်ပဲနဲ့ယူနီကုဒ်ပါလို့ အော်နေရင်တော့ ကျွန်မတို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။
January 12, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
မြန်မာယူနီကုတ်နှင့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်
ယူနီကုတ်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းကို အတိအကျလိုက်နာထားသော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရအားဖြင့် Unicode ဟု စာလုံးပေါင်းသည်။ Unicode စကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံမှာ Universal Character Encoding ဖြစ်သည်။
August 4, 2015 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
မှားနေရင် ပြင် သိချင်ရင် ပူးပေါင်း မြန်မာစာ ယူနီကုတ်အကြောင်း
အပြင်ကနေ ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ ငါလုပ်တာ ယူနီကုတ်ကွလို့ ပြောနေဖို့ မသင့်ပါဘူး။ အားလုံးကို ပါဝင်စေချင်တယ်။ အပြင်မှာ သီးသန့်နေတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ သူတို့ကိုလည်း လာစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ဖောင့်က လူသုံးများတဲ့ ယူနီကုတ်ကွဆိုပြီး အပြင်မှာ အမြင်ကျဉ်းနေရင် တော့ မဖြစ်ပါဘူး။
March 30, 2015 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
ဇော်ဂျီ ရွှေဘ ယူနီကုတ် လူကြမ်းနဲ့ ပွဲကြည့်သူရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဎ္ဍနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဠာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည် ဆိုတဲ့ မြန်မာပန်ဂရမ် ရေးသားဖန်တီးခဲ့သူ ကိုမောင်မောင်ဆန်းအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
March 28, 2015 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.
အကွဲကွဲအပြားပြား ယူနီကုတ်သဘောထားများနှင့် လွဲမှားမှုများ၏ ရှုထောင့်
မြန်မာယူနီကုတ်၊ ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာစနစ်နှင့် နည်းပညာသမားတစ်ဦး၏ ဖြတ်သန်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
March 26, 2015 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ယူနီကုတ်.